Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1319
Indostria : tohanana ny tanora mpandraharaha
Par Taratra sur 13/02/2016 Economie, NS Malagasy
Noderain’ny filoha Rajaonarimampianina ny finiavan’ny mpitantana ny orinasa Gasyplast, hampiasa vola eto an-tanindrazana, omaly, teny Ambohimalaza. Fantatra fa hisy tahiry manokana atokan’ny fanjakana hanohanana sy hanampiana ny tetikasa volavolain’ny mpianatra avy nahavita fianarana. Ho an’ny orinasa Gasyplast, tena ifantohany ny famokarana harona miendrika plastika, nefa natao avy amin’ny vovo-mangahazo. Izany hoe, sokajina ao anatin’ny vokatra […]
Frankofonia : hanohana ny BFV-SG
Par Taratra sur 13/02/2016 Divers, NS Malagasy
Vita sonia, omaly ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny banky BFV-SG sy ny mpikarakara ny fivoriamben’ny Frankofonia, andiany faha-16, hatao eto Madagasikara amin’ity taona ity. Nambaran’ny filoha tale jeneralin’ity banky ity, Bruno Massezfa manan-danja amin’izy ireo ny teny frantsay, anisan’ny fitaovana ilaina amin’ny fampandrosoana, toy ny toekarena, ohatra. Raha ny fanadihadiana, ho lasa teny voalohany ampiasaina maneran-tany […]
Nitondra valin-kafatra ho an’ny depiote : « Miasa ary mahita vokatra ny polisy », hoy ny kaomisera Lié
Par Taratra sur 13/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Manoloana ny fanakianana mavaivay nataon’ireo vondron’ny solombavambahoaka momba ny tsy fandriampahalemana miseholany ao Toamasina, nitondra valin-kafatra ho azy ireo ny talem-paritry ny filaminana anatiny, ny kaomisera Lié nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly, tao amin’ny birao fiasany notronin’ny Kaomisera Razafindahy Manitra, kaomandin’ny Fip ao Toamasina. “Miasa ny polisy ary efa maro ny zava-bitan’ny […]
BNI : omena vahana ny mpifankatia
Mikarakara hetsika manokana ny masoivoho vaovao an’ny banky BNI Madagasikara eny amin’ny tranombarotra Akoor Digue, amin’izao andron’ny mpifankatia izao. Anio 13 febroary, hisy ny « tombola Saint Valentin », hahazoan’ireo tsara vintana, mividy entana avy hatrany ao amin’ny Galerie Akoor. Fotoana ahafahan’ny besinimaro mahafantatra bebe kokoa ity tranombarotra vao nisokatra eny amin’ny vahilava Route Digue ity sy […]
Faravohitra : nosamborin’ny polisy ilay milaza ho “informateur” an’ny BC Anosy
Nilaza ho mpiasan’ny BC Anosy indray ity lehilahy iray. Voasambotry ny polisy izy io, nahitana fanamiana miaramila sy karatra hosoka. Mahazo vahana eto amintsika indray ity fisandohana ho mpitandro filaminana ity. Taorian’ny nahasamborana ireo zandary sandoka tany Toamasina, teto an-dRenivohitra indray ity milaza ho mpanome vaovao akaiky ny polisin’ny BC. Hatramin’ny fisoratana ny asany any […]
Andravoahangy : lehilahy maty notifirin’ny mpanendaka
Mitifitra ary mamono ny mpanendaka ary aza sendra azy ireo. Teny Andravoahangy, lehilahy iray hiantsena, maty notifirin’ny mpanendaka, omaly maraina. Manodidina ny 30 taona eo izy io, ary maty tsy tra-drano vokatry ny tifitra nahazo azy. Teo ambodin’i Mascar izy no nosakanan’ny jiolahy. Nanohitra izy io nanoloana izany, saingy tsy nampoiziny ny fisian’ny basy tany […]
Jery taratra herinandro : samy manana izay maha kere azy
Voafidy ho filohan’ny Antenimierandoholona ny loholona Rakotomanana Honoré, kandidà tokana ary natolotry ny HVM. Mpahay lalàna izy, efa filohan’ny Antenimierandoholona sy ny HCC teo aloha. Nasiany teny ny tokony hanitsiana ny lalàmpanorenana. Eo koa ny amin’ny handraisan’ireo loholona karama avy hatrany. Mahakere? Ifandroritana ny famonjena sy fanampiana ireo mponina any atsimon’ny Nosy, ianjadian’ny haintany sy […]
Halatra nikela Ambatovy : orinasa any Seychelles ahina ho atidoha #canada #sherrit #ambatovy
Tambajotra sy halatra avo lenta! Araka ny efa notaterina teto, nisy halatra nikela tao amin’ny orinasa Ambatovy, nanomboka ny taona 2014. Taorian’izay, nahatraran’ny sampana Polisy mpiandry sisin-tany (Paf) birikina nikela 54 ny teratany poloney, Maciek Pankocsky, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, hanana fikasana ho any Maorisy. Araka ny loharanom-baovao, ahina ho tompon’antoka amin’ity halatra avo lenta […]
Ny vahoaka aloha vao vahiny…
Par Taratra sur 13/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Hisy amin’izay ny hoe fahamarinan-toerana politika? Efa hitsangana avokoa izao ny andrimpanjakana rehetra, fa mandamin-javatra betsaka ny amin’izany ny fijoroan’ny Antenimierandoholona. Na izany aza, eo ihany ny ahiahy tsy ihavanana: tena hampiorina fitoniana ve izany? Mila fampihavanana ny raharaha. Lazain’ny mpitondra rahateo fa fototry ny fampandrosoana ny fihavanam-pirenena. Sanatria, mbola hifandroritana indray ny amin’izay hoe […]
Mampirongatra ny asan-jiolahy ao Toamasina… : «Kolikoly avo lenta eo amin’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana»
Par Taratra sur 13/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
« Vokatry ny kolikoly avo lenta eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ». Izay, araka ny fanakianana nivaivay nataon’ireo depiote vitsivitsy, notarihin’ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena, misahana ny faritra Atsinanana, tao amin’ny haino aman-jery, no mampirongatra ny asan-jiolahy, izay efa mila hivadika asa fampihorohoroana mihitsy. Nikoropaka, nifoha amin’ny torimasony ? Asa, na izay ny anton’ny fivoriana […]
Rugby aty Afrika : nodimandry i Barthez, mpiahy ny lavalava malagasy
Par Taratra sur 12/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Misaona ny tontolon’ny rugby maneran-tany. Nodimandry, tany Castres Frantsa, ny alarobia 10 febroary lasa teo, i Jean-Luc Barthez, talen’ny rugby aty Afrika, nandritra ny 14 taona. Firenena niasany betsaka indrindra, ary notsidihiny matetika i Madagasikara. Niady fo aman’aina mihitsy, tamin’ny fampandrosoana ny lafiny teknika sy fitantanana ary ny fifaninanana, ho an’ny Malagasy, i Barthez, fony […]
Kitra afrikanina : tsy nentin’ny Cnaps Sport i Jimmy Simouri
Par Taratra sur 12/02/2016 Divers, NS Malagasy
Nanainga omaly nihazo an’i Kenya ny delegasion’ny Cnaps Sport, eo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Mpilalao 22, ny ao anatin’ny ekipa. Tsy anisan’ireo hiatrika ity fihaonana ity i Jimmy Simouri. Antony nanajanonana azy ny tsy fahalavorarian’ny toe-batany, araka ny fantatra. Ankoatra izay, ao avokoa ireo mpilalao rehetra nahalalana ity […]
Mpitatitra eto an-dRenivohitra : tsy hidina mihitsy ny saran-dalana
Par Taratra sur 12/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
«Tokony hidina amin’izay ny saran-dalana amin’ny taxi-be mampitohy ny Renivohitra sy ny toerana manodidina, satria efa intelo nihena ny vidin’ny solika ampiasaina tao anatin’ny telo volana », hoy ny mpitarika ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa, Rakotorova Rabetsara na Ralita, omaly. Tokony tsy ho voatery hitovy hatrany koa ny vidin’ny solika amin’ny orinasa mpaninjara telo […]
Toamasina : nampahafantarina ny vahoaka ny CHU-Morafeno
Nanatanteraka varavarana misokatra, nandritra ny roa andro (4- 5 febroary lasa teo) ireo mpitantana eo anivon’ny hopitaly manara-penitra etsy Morafeno. Efa notolorana anarana vaovao hoe “Centre hospitalier universitaire de Morafeno” izy, hoy ny mpikambana anivon’ny komity manomana ny hetsika tarihin’ny talen’ny hopitaly, ny profesora Ralandison Stephane. Tanjona ny nampahafantatra ny tolotra misy anivon’ ity toeram-pitsaboana […]
Basikety – Coupe du Président : hangotraka ny ampahefa-dalana rehetra
Hiditra amin’ny ampahefa-dalana anio ny “Coupe du Président”. Saika tafita hiatrika izany avokoa ireo ekipa goavana nifaninana tamin’ireo Zone Nord sy Zone Centre. Hangotraka, araka izany, ny fihaonana rehetra. Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana. Hiditra amin’ny ampahefa-dalana, anio, ny fiadiana ny « Coupe du Président », taranja basikety, amin’ireo Zones roa, Nord any Antsiranana sy Centre any Toamasina. […]
Kempo : hizara ny fahaizany ary hampiofana Rakotonindrina Parfait
Tafiditra ao anatin’ny fanapariahana ny taranja haiady kempo ny fikambanana PFC Kempo / DA, tarihin’ny filohany Rakotonindrina Parfait, amin’izao fotoana izao. Araka izany, hanome fiofanana ary hizara ny traikefany eo amin’ity taranja vao nampidirina teto Madagasikara ity ny filohan’ny PFC Kempo / DA, ny 20 sy 21 febroary izao, etsy Mahamasina, sous-gradins. Raha ny fandaharam-potoana […]
Lalam-pirenena tapaka : efa misokatra ny RN 4 sy ny RN 6
Par Taratra sur 12/02/2016 Economie, NS Malagasy
Manana tetibola manokana ny minisiteran’ny Asa vaventy hanarenana ny lalam-pirenena tapaka, vokatry ny loza voajanahary. Tsy voaray ara-potoana kosa ny hetra hikojakojana ny lalana (Fer). Tapaka vokatry ny orambe nikija ny lalam-pirenena fahefatra (RN 4) sy fahenina (RN 6). Nilaza ny minisitry ny Asa vaventy, Ratsiraka Roland, omaly, fa efa misokatra ireo lalana ireo, nanomboka […]
Vatsim-piofanana : vonona amin’ny fampandrosoana ny tanora Yali
Nihaona tamin’ny filoha Rajaonarimampianina Hery, omaly, ny solontenan’ireo tanora malagasy nahazo ny vatsim-piofanana nankany Etazonia antsoina hoe « Mandela Washington Fellowship » ny taona 2014 sy 2015. Tafiditra ao anatin’ilay fandaharan’asan’ny filoham-pirenena amerikanina, Barack Obama, Young African Leaders Initiative (YALI) na fandaharanasa ho an’ny tanora mpitarika aty Afrika ity vatsim-pianarana ity. Niaraka tamin’ny tompon’andraikitry ny masoivoho amerikana […]
Telma : tolotra manokana ho an’ny mpifankatia
Tsy avelan’ny Telma handalo fotsiny ny fetin’ny mpifankatia ny 14 febroary. Hisy tolotra manokana homena ny mpanjifa, azo atao fanomezana tsara. Finday karazany roa, X 034, amidy 24.000 Ar, raha vidiana amin’ny alalan’ny M’Vola ary 29.000 Ar raha tolobotsotra. Ankoatra ny tolotra mahazatra ao aminy, mampiavaka azy ny fahafahana manao Facebook messenger, ahazoana miresaka mivantana, […]
Atam : manentana hiverina ambanivohitra ny fikambanana
Nijoro any amin’ny faritra Analamanga, ny taona 2013 ny fikambanana Andrin’ny tanàna mandroso (Atam). Manana sampana eto Vakinankaratra izy ankehitriny, ao amin’ny fokontany Mahazina, hifantoka amin’ny fampandrosoana eny ambanivohitra. Nanentana ny tanora, ny vehivavy an-tanàn-dehibe ny filohany, Rtoa Rasoamampionona Lily, hiverina ifotony eny ambanivohitra, indrindra ireo tsy anasa. Teny filamatry ny fikambanana ny hoe: “Ny […]
Manan-tsafidy ny mpankafy… : maro karazana ny hetsika hanamarihana ny fetin’ny mpifankatia
Par Taratra sur 12/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Safidy marolafy! Ny fitiavana no hitambarana, fa ny karazan-gadona sy mozika kosa, maroloko. Raha fanomezana tsara indrindra ny mozika, hahazo tombony ireo mpifankatia sady mpankafy amin’ity faran’ny herinandro ity. “Tafaray samy tia”, etsy amin’ny CCesca Dadah sy Fafah. Fiarahan’ny feo sy ny gitara, fa indrindra ireo hiram-pitiavana milantolanto avy hatrany no mby ao an-tsaina. Milatsaka […]
Par Taratra sur 12/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Raisina ho tombontsoam-bahoaka ny fanamboaran-dalana Soavimasoandro-Ivato. Lalana efa misy, miainga eo Tsarasaotra Soavimasoandro ity hatsaraina ity, mandalo ny sisin’ny lemaka Laniera sy ny farihy Soute à Bombe ary mivoaka eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Noraisina io fanapahan-kevitra io teo anivon’ny filankevitry ny minisitra, ny 10 febroary teo, tafiditra ao anatin’ny fanamboarana fotodrafitrasa handraisana ny fivoriamben’ny Frankofonia […]
Toetr’andro : mihaodihaody ny rivodoza Daya
Nivadika ho rivodoza ary nomena anarana Daya ilay faritra andro ratsy ao amin’ny ranomasimbe Indianina. Rivodoza fahefatra tato amin’ny fari-dranomasina misy antsika ity Daya ity. Omaly, tany amin’ny 500 km atsinanan’i Farafangana no nisy ny foibeny. Mizotra mianatsimo atsinanana ny diany ary mihamanalavitra an’i Madagasikara hatrany. Tsy misy atahorana araka izany ny fiantraikany amin’ny toetr’andro […]
Eny amin’ny Batou Beach : fivoriambe voalohan’ny fikambanana Mafami
Fivoriambe voalohany ho fifankahafantarana sy fifampiarahabana nahatratra ny taona ! Izay ny hataon’ny mpikambana ao amin’ny Mpianatra ambaratonga ambony faritany Antananarivo miray (Mafami), eny amin’ny Batou Beach Ambohimanambola rahampitso 13 febroary. Eo ambany fiahian’ny filoha nasionalin’ny fikambanana vaovao, Rasolomampionona Hasimpirenena, ny fotoana. Maro ireo olo-manan-kaja nasaina hanotrona ity fotoana lehibe ity miaraka amin’ireo mpikambana rehetra. Ankoatra […]
Malagasy guitar masters : tarika mpilalao gitara ranofotsiny
Na tsy misy ifandraisany loatra amin’ny fetin’ny mpifankatia aza, azo lazaina ho fotoana hifampizarana ny kanto sy ny tsara indrindra ny fampisehoana etsy amin’ny Alliance française etsy Andavamamba (AFT), anio hariva. Hiavaka amin’ireo hetsika samihafa hitranga amin’ity faran’ny herinandro ity io. Tsy inona moa izany fa ny kaonseritra gitara iarahana amin’ireo kalaza telo mirahalahy: i […]
« Précédent 1 … 1 317 1 318 1 319 1 320 1 321 … 1 357 Suivant »
Mort suspecte d’un médecin au CHU Morafeno: une enquête mixte en cours 27/05/2020
Manakambahiny: une maison à étage ravagée par un incendie 27/05/2020
Noyade – Nosivarika: le corps d’un gendarme retrouvé trois jours plus tard 27/05/2020
Energie domestique: l’utilisation du bois énergie prédomine toujours 27/05/2020
Lutte contre le Covid-19: la CUA mise sur le renforcement de la sensibilisation 27/05/2020